Filannoo Itoophiyaa 2021: ‘Murtee filannoorratti hin hirmaannu jedhurra hin geenye’- KFO – Kichuu
HomeFilannoo Itoophiyaa 2021: ‘Murtee filannoorratti hin hirmaannu jedhurra hin geenye’- KFO
Filannoo Itoophiyaa 2021: ‘Murtee filannoorratti hin hirmaannu jedhurra hin geenye’- KFO
KFO’n haala amma jiruun filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa irratti hirmaachuun akka isa rakkisu hime
Koongirasiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n haala amma jiruun filannoorratti hirmaachuun baay’ee akka isa rakkisu ibsa har’a miidiyaalef laaten himeera.
Miseensotafi deeggartoota isaarratti hidhaan hammaachuu kan himu KFOn, akka fakkeenyatti godina Jimmatti miseensootnisaa 200 ol hidhaarra akka jiran akkasumas Shawaa Bahaatti miseensootnisaa 700 ta’an aanaalee garaagaraa keessatti hidhaarra akka jiran ibsa har’aa kenne kanaan ibseera.
Kunneen godina Shawaa Bahaatti hidhaman keessaa, “walakkaan kan mana murtiitti hin dhiyaanneedha. Nama barbaadetu si hidha. Hidhataatu dirreerratti si ajjeesa,” jedhan Dura Taa’aa Itti-aanaan KFO Obbo Mulaatuu Gammachuu.
Miseensootaafi deeggartoota isaarratti doorsifni adeemsifamaa jiraachuu, akkasumas waajjira bananii akka hin seenne dhorkamuu kan hime dhaabichi waajjiraaleensaa godinaalee garaagaraa keessatti argamanis humnootii mootummaan caccabuufi saamamuu isaanii himeera.
Filannoorratti “ni hirmaanna jennee qophii barbaachisu taassisaa turre. Namootaafi dookumantii qopheeffataa turre. Amma garuu yaaddoo keessa buunee jirra,” jedhan Itti-gaafatmaan Waajjira Mummee KFO Obbo Xurunaa Gamtaa.
Dhaabichi miseensootnisaa manni murtii akka gadhiifaman ajaje hidhaarra tursiifamaa jiraachuu isaanis komateera.
Obbo Xurunaa Gamtaa, “erga hidhamee waggaa tokko ta’ee kan mana murtiitti hin dhiyaanne jira. Qindeessaa itti-aanaan koree KFO Wallaga Lixaa Abrahaam Dhiyanaa erga hidhamee waggaa tokkoo ol ta’eera. Waajjiraaleen keenya iddoowwan garaagaraatti argaman hooggantootni hidhamuu isaaniifi doorsifni waan irratti gaggeeffameef cufamanii jiru,” jedhan.
Namootni yakka raawwatan seeraan gaafatamuu kan hin mormine ta’uu kan hime Koongirasiin Federaalawaa Oromoo, ‘miseensotnisaa yakki isaan hin raawwanne irratti maxxanfamee maqaa olaantummaa seeraatiin hidhamanii jiran’ akka gadhiifaman gaafateera.
Dhaabbatichi rakkoolee isa mudataa jiran kunneen hooggantoota olaanoo paartii biyya bulchaa jiru, Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa, Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaafi Waajjira Mummee Ministiraatti iyyatanis furmaata quubsaa akka hin arganne himeera.
Dhaabni Koongirasii Federaalawaa Oromoo rakkooleen isa mudataa jiran akka furamaniif filannoo biyyaalessaa jahaffaa irratti rakkoo malee akka hirmaatuuf hooggantootni, miseensoonni, deeggartootniifi kutaaleen hawaasaa biroo sababa ejjennoo siyaasaa qabaniin hidhaman akka hiikkaman gaafateera.
“Ammallee yeroon jira. Waliigalteen biyyalessaa taasifamee KFO qofa osoo hin taanee dhaabbileen siyaasaa hundi sochii bilisaa taasisuu yoo danda’an rakkoo biyya keenyaaf furmaata ni ta’a jennee yaadna,” jedhan Itti-gaafatmaan Waajjira Mummee KFO Obbo Xurunaa Gamtaa.
Kana malees, qaamoleen nageenyaa akka poolisii, humna addaafi milishaa gartummaa siyaasaarraa bilisa ta’anii akka hojjetanis KFOn waamicha dhiyeessee jira.
Gama biraatin, “miidiyaaleen bulchiinsa mootummaa jala jiran fedhii paartii biyya bulchaa jiru qofa calaqisaa jiru. Miidiyaaleen dhuunfaa mootummaa walin hidhata qaban tokko tokkos mootummaan paartilee siyaasaa sabummaa bu’uura godhatanii hundaa’an akka balleessuuf waamicha taasisaa jiru,” kan jedhe KFOn miidiyaaleen dirqama ogummaa isaanii akka bahatan waamicha dhiyeessera.
Dhummarrattis, “mootummaa, paartin biyya bulchuufi Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa filannoon bilisa, haqa qabeessafi fudhatama uummataa qabu akka adeemsifamuuf ejjennoo isaanii ammaa dhaabun dirreen siyaasaa mijataa akka uumamu akka taasisan ni gaafanna,” jedheera.
Keessattuu ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda namootni kumaan lakka’aman godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa hidhamuun isaanii kan yaadatamu yemmuu ta’u, mootummaan namootni hidhaarra jiran ejjennoo siyaasaa qabanin osoo hin taanee yakkaan shakkamanii hidhamuu isaanii himaa tureera.
Source: bbc afaanoromoo